प्रदेश नम्बर ७ काे ९ जिल्लामा कहाँ कसकाे जीत/अग्रता ? – Himalaya TV
Home » समाचार » प्रदेश नम्बर ७ काे ९ जिल्लामा कहाँ कसकाे जीत/अग्रता ?
प्रदेश नम्बर ७ काे ९ जिल्लामा कहाँ कसकाे जीत/अग्रता ?
१५ असार २०७४, बिहीबार १५:४६
काठमाण्डौ, १५ असार । ९ जिल्ला रहेकाे प्रदेश नम्बर ७ मा १ उपमहानगरपालिका, ३३ नगरपालिका, ५४ गाउँपालिकासहित ८८ स्थानीय तहमा दोस्रो चरणमा चुनाव भएको छ ।
प्रदेश नम्बर ७ काे ७ सय ३४ वडामा १३ लाख ३ हजार ७ सय १४ मतदाता रहेका छन् भने पछिल्लाे मतगणनाकाे ताजा मतगणना अाउने क्रम पनि जारी छ ।
मतगणनाको पछिल्लो अवस्था
बाजुराको बडिमालिका नगरपालिका वडा नम्बर १ मा नेपाली कांग्रेसका रामबहादुर कार्की विजयी भए । उनी ५ सय ४० मत ल्याएर विजयी भएका हुन् । उनका प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका दिलबहादुर बिकले २ सय ८३ मत ल्याए । त्यस्तै वडा नम्बर २ बडिमालिका नगरपालिकाकाे अध्यक्षमा नेकपा एमालेका डम्मर महत २ सय ४२ मत ल्याएर विजयी भए ।उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका गोपाल कार्कीले २ सय ३६ मत ल्याए ।
बडिमालिका नगरपालिकाकाे मेयर र उपमेयरमा कांग्रेसकै पदम बडुवाल र कविता विष्टले अग्रता लिएका छन् । बाजुराको गहुमुल गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसले अग्रता लिएको छ । कांग्रेसका गाउँपालिका अध्यक्ष उम्मेद्वार देवबहादुर रोकायाले ताजा अवस्थामा २ सय ८३ मत ल्याएका छन् । कांग्रेसबाटै उपाध्यक्षका उम्मेदवार उमा रोकायाले २ सय ८४ मत ल्याइन् । यस्तै अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार नेकपा एमालेका हरि कायाले २ सय ७९ मत ल्याउँदा उपाध्यक्षमा एमालेकै सीता रोकायाले २ सय ८१ मत ल्याइन् ।
गहुमुल गाँउपालिकाको वडा नम्बर ६ को अध्यक्षमा नेकपा एमालेका प्रकाश रोकाया २ सय ८८ मत ल्याएर विजयी भए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका गोरख रोकाया २ सय ८१ मत ल्याए । उनले ७ मतले पराजित भए ।
बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ मा नेकपा एमाले प्यानलै विजयी भएको छ । वडा अध्यक्षमा एमालेका वीरबहादुर रावल ३ सय ४८ मत ल्याएर विजयी हुँदा नेपाली कांग्रेसका प्रतिद्वन्द्वी नन्दलाल खड्काले १ सय ४८ मत ल्याए। यस्तै मेयरमा कांग्रेसका पदम बडुवालले ९१६, एमालेका गगन रावलले ८७७ र माओवादी केन्द्रका मनबहादुर बिकले २० मत ल्याएका छन् ।
बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकाको वडा नम्बर १ मा नेपाली कांग्रेस प्यानलसहित विजयी भएको छ । वडा अध्यक्षमा निर्पराज खत्री ४ सय ५ मत ल्याएर प्यानलसहित विजयी भए । कांग्रेसका मेयरका उम्मेदवार पदम गिरीले ४१३, एमालेका मेयरका उम्मेदवार जनक बोहराले ३३८, माओवादी केन्द्रका भरत बिकले ९८ मत ल्याएका छन् । उपमेयरमा कांग्रेसकी रीता शाही सिंहले ३५३, एमालेकी श्रृष्टि रेग्मीले ३९६ र माओवादी केन्द्रकी रामकला लोहारले ६१ मत ल्याएका छन् ।
हिमाली गाउँपालिकाका चारवटा मतदान केन्द्रका मतपेटिका अझै पनि मतगणना स्थलसम्म ल्याउन सकिएको छैन । मौसम सफा नभएकोेले हेलिकोप्टर उड्न नसक्दा मतपेटिका ल्याउन नसकिएको हो ।
बाजुरा छेडेदह गाउँपालिका–१ मा एमाले विजयी भएको छ । एमालेका वीरबहादुर रावत ६ सय ६१ मतका साथ विजयी भएका हुन् । यो गाउँपालिकाको अध्यक्षमा पनि एमालेकै अग्रता छ । एमालेका अध्यक्षका उम्मेद्वार लालबहादुर वलीले ६ सय ५७ मत प्राप्त गरेका छन् । उनलाई ५ सय ५ मतसहित कांग्रेसका उम्मेद्वार नरबहादुर रावतले पछ्याइरहेका छन् ।
यस्तै उपाध्यक्षमा पनि एमलेकी पवित्रा शाही ६ सय २५ मतका साथ अगाडि छन् । उनलाई कांग्रेसकी कुन्तीदेवी साउदले ५ सय २ मतसहित पछ्याई रहेकी छिन् ।
कञ्चनपुरमा नौ वटा स्थानीय तहमध्ये शुक्लाफाँटा र बेलौरी नगरपालिकामा अझै मतगणना सुरु हुन सकेको छैन । सर्वदलीय बैठक नबसेकाले मतगणना सुरु हुन नसकेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतकाे कार्यालयले जानकारी दियाे । अन्य महाकाली र पुनर्वास नगरपालिकामा पनि मतगणना चलिरहेको छ । महाकालीमा ताजा अवस्थामा मेयरका उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका बीर बहादुर सुनारले २ सय ८९ मत ल्याएका छन । एमालेका किशोर लिम्बुले २ सय मत ल्याएका छन् ।
यस्तै पुनर्वासमा कांग्रेसले १ सय ३०, एमालेले १ सय १४ मत ल्याउँदा माओवादी केन्द्रले ८७ मत ल्याएको छ । कृष्णपुर नगरपालिका, बेदकोट नगरपालिका, भीमदत्त नगरपालिका, लालझाँडी गाउँपालिका र बेलडाडी गाउँपालिका पनि मतगणना सुरु भएको छ ।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नम्बर १ मा नेपाली कांग्रेसले अग्रता लिएको छ । मेयरमा कांग्रेसका पदम बोगटीले २८ मत ल्याएका छन् । यस्तै एमालेका सुरेन्द्र बिष्टले १८ र माओबादी केन्द्रका गोपाल रसाइलीले ३ मत ल्याएका छन् । यस्तै उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसका सुशीला चन्दले २७, एमालेका माया जोशीले १६, माओवादी केन्द्रका नारु सिंहले २ र राप्रपाका खन्जर देवी कुँवरले २ मत ल्याएका छन् ।
यस्तै बेदकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर १ मा नेकपा एमालेले अग्रता लिएको छ । एमालेका अशोक चन्दले ३० मत ल्याएका छन् । यस्तै माओवादी केन्द्रका मिनराज गिरीले २६ र कांग्रेसका भोजराज बोहराले १९ मत ल्याएका छन् । यस्तै उपमेयरमा एमालेले ३१, माओवादी केन्द्रका २८ र कांग्रेसले १८ मत ल्याएको छ । कञ्चनपुरको बेल्डाडी गाउँपालिकामा एमालेले अग्रता लिएको छ । एमालेले ३५, कांग्रेसले २५ र माओवादी केन्द्रले २० मत ल्याएको छ ।
यस्तै महाकाली नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसले ४ सय ६६ मत ल्याएर अग्रता लिएको छ । एमालेले ३ सय ८९, माओवादी केन्द्रले ८० र राप्रपाले १ सय ३३ मत ल्याएको छ । यस्तै उपमेयरमा कांग्रेसले ३ सय ६६, एमालेले ४ सय ६२, माओबादीले ८५ र राप्रपाले १ सय ३२ मत ल्याएको छ ।
बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर १ को अध्यक्षमा एमालेका परणबहादुर चन्द विजयी भएका छन् । उनी ४ सय ९२ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका जमनसिंह साउदले ३ सय २५ मत ल्याए । वडा नम्बर १ मा एमालेका चन्दको प्यानल नै विजयी भएको हो । अहिले पञ्चेश्वरको वडा नं ६ को मतगणना भइरहेको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्षमा पनि एमालेले अग्रता लिएको छ । अध्यक्षमा एमालेका गोरखबहादुर चन्दले ५ सय ४२, नेपाली कांग्रेसका दिनेशबहादुर चन्दले ३ सय १० र माओवादी केन्द्रका रमेशबहादुर चन्दले ३ सय ९८ मत ल्याएका छन् । राप्रपाका विरेन्द्रबहादुर चन्दले १२ मत ल्याएका छन् । यस्तै उपाध्यक्षमा एमालेका बिना भट्टले ५ सय २८, नेपाली कांग्रेसका विन्दु चन्दले २ सय ८४ र माओवादी केन्द्रका मञ्जु चन्दले ४ सय ५२ मत ल्याएका छन् ।
बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकामा पनि मतगणना सुरु भएकाे छ । जिल्लाको पुरानो नगरपालिकाको रुपमा रहेको दशरथचन्द नगरपालिकामा बिहान ८ बजेदेखि मतगणना सुरु भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत धुव्रकुमार शाहले जानकारी दिए । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा सर्वदलीय बैठक बसी मतगणनाको तयारी भइरहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएकाे छ । मेलौली नगरपालिका, पुरचौडी नगरपालिका, शिवनाथ गाउँपालिका र पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा बुधबार रातिदेखि नै मतगणना भइरहेको छ ।
पछिल्लो मत परिणाम अनुसार पुरचौडी र मेलौली नगरपालिकामा कांग्रेसको अग्रता छ भने पञ्चेश्वर र शिवनाथ गाउँपालिकामा एमालेले अग्रता लिएको छ । बैतडीको पुरचौंडी नगरपालिका १ मा नेपाली कांग्रेस प्यानलसहित विजयी भएको छ । वडा नं १ मा नेपाली कांग्रेसका गणेशबहादुर गडाल ४ सय २९ मत ल्याएर प्यानलसहित विजयी भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा माओवादी केन्द्रका जनकबहादुर धानुकले ३ सय ६० मत ल्याए ।
दलित महिला सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका राधिका ओडले ४ सय २६, महिला सदस्यमा विन्देश्वरी जोशीले ३ सय ८१, खुल्ला सदस्यमा नेपाली कांग्रेसकै जगतसिंह भण्डारी ४ सय ११ र हिक्मत जागरीले ४ सय २४ मत ल्याएर विजयी भए । पुरचौडी नगरपालिकाको वडा नम्बर १ को मतगणना सकिएपछि अहिले वडा नम्बर १० को मतगणना भइरहेको छ ।
पुरचौडी नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा पनि कांग्रेसकै अग्रता छ । मेयरमा कांग्रेसका दीपकबहादुर बमले ४ सय ५९, नेकपा माओवादी केन्द्रका रणबहादुर कुँवरले २ सय ८३, नेकपा एमालेका कर्णबहादुर कुँवरले १ सय ९ मत ल्याएका छन्। यसैगरी उपमेयरमा कांग्रेसका उत्तरा नेपाल सार्कीले ३ सय ८१, एमालेका जानकी साउदले ६८ र नेकपा माओवादी केन्द्रका जानकी ऐर बमले ३ सय ६४ मत ल्याएका छन् ।
यस्तै मेलौली नगरपालिकामा बुधबार राति ११ बजेदेखि मतगणना सुरु भएको छ । वडा नं १ बाट सुरु गरिएको मतगणनामा २ सय ६३ मत गनिसक्दा नेपाली कांग्रेसले अग्रता लिएको छ । मेयरमा नेपाली कांग्रेसका कृष्ण सिंह नायकले १ सय १५, एमालेका जगदीशसिंह नायकले ८०, माओवादी केन्द्रका भीम बहादुर चन्दले ४२ मत र राप्रपाका सुरेन्द्र बहादुर चन्दले ७ मत प्राप्त गरेका छन् । यस्तै उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसका राधा ओझाले ८५, एमालेका मानमती भट्टले ७९, माओवादी केन्द्रका केतु चन्दले ३८ र राप्रपाका चन्द्रकला साउँदले ४५ मत प्राप्त गरेका छन् ।
यस्तै शिवनाथ गाउँपालिकाकाे अध्यक्ष पदमा नेपाली कांग्रेसका कर्ण साउदले १ सय १८, एमालेका भरत मडैले १ सय ३५, माओवादी केन्द्रका धनवीर धनाडीले १४, राप्रपाका मदनसिंह साउदले २१ मत प्राप्त गरेका छन् ।
बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको वडा नं ६ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्यानलसहित विजयी भएको छ । वडा अध्यक्षमा राप्रपाका रामसिंह पुजारा २ सय ५६ मतसहित विजयी भएका हुन् । उनका प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका इन्द्र भण्डारीले १ सय ८४ मत ल्याए । यस्तै महिला सदस्यमा राप्रपाका सरस्वती पन्त भण्डारीले २ सय ४६, दलित महिला सदस्यमा शकुन्तला औजीले २ सय ४१, खुला सदस्यहरुमा राप्रपाकै गोविन्दसिंह भण्डारीले २ सय ९१ र कृष्णसिंह भण्डारीले २ सय ४१ मत ल्याएर विजयी भए ।
यस्तै दशरथचन्द नगरपालिकामा पनि राप्रपाले अग्रता लिएको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार २ सय मत गणना भइसक्दा मेयर पदमा राप्रपाका पुष्करराज जोशी ‘लख्खाभाई’ ले ८८, नेपाली कांग्रेसका नरेन्द्रसिंह थापाले ५१, नेकपा एमालेका देवदत्त भट्टले ३३ र नेकपा माओवादी केन्द्रका खीमानन्द भट्टले १० मत ल्याएका छन् । यस्तै उपमेयरमा राप्रपाकी अम्बिकादेवी भण्डारीले ६४, नेपाली कांग्रेसकी मीना चन्दले ५८, नेकपा एमालेकी सरस्वती नेपालीले २४ र नेकपा माओवादी केन्द्रकी कमला कार्कीले १२ मत ल्याएका छन् ।
दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका, लेकम गाउँपालिका र मार्मा गाउँपालिकामा मतगणना सुरु भएको छ । बिहीबार बिहानदेखि सुरु मतगणनामा लेकम गाउँपालिकामा एमालेले अग्रता लिएको छ । अध्यक्षमा एमालेका उम्मेदवार परमानन्द जोशीले ४ सय ३३ मत ल्याएका छन् । माओवादी केन्द्रका रामदत्त जोशीले २ सय ८९ र नेपाली कांग्रेसका उत्तम नाथले २ सय ८६ मत ल्याएका छन् । यस्तै मार्मा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका जमनसिंह धामीले १ सय ७२ मत ल्याएका छन् । एमालेका देवसिंह महरले १ सय ५३ र कांग्रेसका गोपालदत्त जोशीले ७५ मत ल्याएका छन् ।
यस्तै शैलेशिखर नगरपालिका र अन्य चार ओटा गाउँपालिकामा मतगणनाको तयारी भइरहेको छ । दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ को ठाङरु र पिङ्कर मतदान केन्द्रका मतपेटिका हेलिकोप्टरमार्फत ल्याउने तयारी भइरहेको छ । डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसका बाजीसिंह खड्काले अग्रता लिएका छन् । उनले ३ सय १ मत ल्याएका छन् । यस्तै एमालेका मञ्जु मलासीले ८४ मत ल्याउँदा माओवादी केन्द्रका प्रेम नेपालीले ४८ मत प्राप्त गरेका छन् ।
उपमेयरमा कांग्रेसका प्रसिस महराले १ सय ९७, एमालेका शिवराज खड्काले १ सय ९६ र माओवादीका तुलसी सोबले १५ मत मात्रै ल्याएका छन् । यस्तै शिखर नगरपालिकाको मतगणनामा कडा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । मेयरका उम्मेदवार कांग्रेसका सीताराम जोशीले १ सय ६६ मत ल्याउँदा उपमेयरमा धौलीदेवी रावलले १६६ मत ल्याएकी छिन् । यस्तै एमालेका मेयर शेरबहादुर मल्लले १ सय २ मत ल्याउँदा उपमेयरमा राधिका बोहराले पनि १ सय २ मत नै ल्याएकी छिन् ।
यस्तै माओवादी केन्द्रका मेयर उम्मेद्वार रमेश जोशीले १४ र उपमेयरमा चन्द्रा साउदले पनि १४ मत नै ल्याएका छन् । यस्तै डाक्टर केआईसिंह गाउँपालिकाको अध्यक्षमा कांग्रेसका लोकेन्द्र शाहीले २ सय ४२ र उपाध्यक्षमा मिना विष्टले पनि २ सय ४२ मत नै ल्याएका छन् । यस्तै एमालेका यज्ञराज जोशीले अध्यक्षमा १०९ र उपाध्यक्षमा मीना विष्टले पनि १०९ मत नै ल्याएका छन् । यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट मिनबहादुर मलासीले अध्यक्षमा १११ र उपाध्यक्षमा हरिना भण्डारीले १११ मत नै ल्याएकी छन् ।
कैलालीकाे धनगढी उपमहानगरपालिकामा मतगणना सुरु भएको छ । वडा नम्बर १ बाट सुरु भएको मतगणनामा स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमालले ३२ मत ल्याएका छन् । नेपाली कांग्रेस ३०, माओवादी ७ र एमालेले ४ मत ल्याएको छ । मतगणना सुरु भएका टीकापुर नगरपालिकामा लोकतान्त्रिक फोरमले अग्रता लिइरहँदा जोशीपुर गाउँपालिकामा पनि लोकतान्त्रिक फोरमले नै अग्रता लिएको छ ।
भजनी त्रिशक्ति नगरपालिकामा पनि लोकतान्त्रिक फोरमले नै अग्रता लिएको छ । गौरीगंगा नगरपालिका, कैलारी गाउँपालिकामा पनि लोकतान्त्रिक फोरमको अग्रता छ । यस्तै बर्दगोरिया गाउँपालिकामा एमालेको अग्रता छ भने लम्की चुँवा नगरपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका, चुरे गाउँपालिकामा पनि मतगणना सुरु भएको छ । तर अझै पनि गोदावरी नगरपालिका र मोहन्याल गाउँपालिकामा अझै सुरु हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मतदान गरेको क्षेत्र डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउपालिकामा नेपाली कांग्रेसले अग्रता लिएको छ । वडा नम्बर १ को मतगणनामा कांग्रेसले १ सय ४९, एमालेले ३५ र माओवादी केन्द्रले ९ मत ल्याएकाे छ । यस्तै उपाध्यक्षमा कांग्रेसले १ सय ४७, एमालेले ३८ र माओवादी केन्द्रले ८ मत ल्याएको छ ।
अछामकाे कमलबजार नगरपालिकामा मत गणना भइरहेको छ । ताजा अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले ७६, नेकपा एमालेले ५९, माओबादी केन्द्रले २० मत प्राप्त गरेकाे छ । यस्तै अछामको रामारोशन गाँउपालिकामा मतगणना भइरहँदा माअाेवादी केन्द्रले ११४, एमालेले ७५ र नेपाली कांग्रेसले ११ मत प्राप्त गरेकाे छ ।
साफेबगर नगरपालिकाको मतदान केन्द्रमा एमालेले भागेश्वरमा रहेको मतदान केन्द्रलाई कब्जा गरी एकलौटी मतदान गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले विराेध गरेको छ । नेपाली कांग्रसले पुनः मतदान गर्नु पर्छ भन्ने माग गदै आइरहेको छ । ढकारी गाँउपालिका वडा नम्बर ७ मा नेपाली कांग्रेसले १०६, एमालेले १११, र माओबादी केन्द्रले १९ मत प्राप्त गरेकाे छ ।
यस्तै बान्नीगडी जयगढ गाँउपालिकाको पनि मतगणना सुरु भएसँगै मंगलसैन नगरपालिकामा पनि मतगणना कार्य सुरु भएकाे छ । चौरपाटी गाँउपालिकामा वडा नम्बर ४ को बैजनाथ मतदान केन्द्रमा भएको निर्वाचनामा मत हाल्ने बिषयमा चलेको बिवाद कारण आज बसेको सर्बदलीय बैठक बिना निश्कर्ष टुंगिएकाे छ ।